अर्काकी श्रीमती भगाएर ‘तेस्रो बिहे’ गर्ने वडाध्यक्षलाई किन कानुन लागेन ? – Paluwa Khabar
मंग्सिर १२, २०७७ शुक्रबार 34
आशिष केसी/ न्युज २४
सल्यान, १२ मंसिर । सल्यानमा एक जना जनप्रतिनिधिले तेस्रो विवाह गर्दा पनि प्रशासनको रोकतोकबिना नै गुपचुप मिलान भएको छ । जिल्लाको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष इन्द्र कुमाइले गाउँकै एक स्थानीय महिलासँग तेस्रो प्रेम-विवाह गरे पनि प्रहरी प्रशासनले अध्यक्षलाई सुरक्षा दिएर वडामा ल्याएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
वडा अध्यक्षले तेस्रो विवाह गरेपछि ती महिलाको पहिलो श्रीमान् नोखिराम बोहरालाई जारीसँगै उनको ऋणसमेत तिरिदिने सहमति भएको छ । वडा अध्यक्षले ३ लाख ८० हजार जारी र ३ लाख ९५ हजार वोहराको ऋण तिरिदिने सहमति गरेका छन ।
स्थानीयका अनुसार बहुविवाह गर्ने वडा अध्यक्षलाई भने केही दिन अघिदेखि प्रहरीले सुरक्षा दिएर वडामा कामकाज गर्ने बाताबरणको निर्माण गरेको स्थानीयको भनाई छ ।
वडा अध्यक्ष कुमाईको याे तेस्रो विवाह हो । उनीसँग विवाह गर्ने नयाँ महिला गौमती बाेहराका पहिलाे श्रीमान् पट्टि ५ बच्चाबच्ची र वडा अध्यक्षको पनि ४ बच्चाबच्ची रहेका छन् ।
वडा अध्यक्ष कुमाइले भने गौमतीको श्रीमान नोखिराम बाेहराले घरबाट निकालिदिएपछि मर्ने डरले आफुले विवाह गरेको जनाउँदै आएका छन् । योसहित अब अध्यक्षको अवैध ३ वटा श्रीमति भएका छन् । पीडित नोखिरामले न्यायको लागि भौतारिए पनि न्याय नपाउने उपाय देखेपछि उनले मिल्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रमसख गोबिन्द थापाले वडा अध्यक्षले तेस्रो बिहे गरे भन्ने सुनिएपनि आफु कहाँ उजुरी नआएको र सार्बजनिक पदमा बसेको ब्यक्तीलाई कानुन लाग्दैन भन्नु गलत भएको बताए । उनिले प्रहरीले गलत गर्ने वडा अध्यक्षलाई सुरुक्षा पनि नदिएको र जो कोहि आएर पनि उजुरी दिए कार्बाहि प्रक्रियामा अगाडी बढाउने उनको तर्क छ ।
Prevगाडीकाे टाययर पड्किदा बर्दियामा भयानक दुर्घटना
Nextहत्या आराेप लागेका वडा अध्यक्ष घर फर्कदा अविर जात्रा